Vaovy. Ny tarika Vaovy dia tarika avy any Androy natsangani
ⓘ Vaovy. Ny tarika Vaovy dia tarika avy any Androy natsangani Jean Gabin Fanovona taminny taona 1974. Io anatana io dia avy aminny anaranny karazan-kazo mafy tsy ..
1. Zavamaneno nampiasainy
Nampiasa fitaovana maoderina izy. Ny taona 1984 izy dia niverina nampiasa ny fomba tranainy: antsa, amponga, marovany. Fa ankehitriny kosa dia natambany ireo fomba roa ireo.
2. Fahafatesani Jean Gabin Fanovona
Ny vatana mangatsiaka dia nentina tany Ambovobe Adroy taminny harivanny 10 marsa 2010. Ny omalinio izy dia nampakarinny minisitry ny Kolontsaina ho aminny mari-boninahitry ny Chevalier de l’Ordre National Malagasy tao an-tram-pokonolona Analakely izay nanaovana ny fiaretan-tory hatraminny alatsinainy.